ClamCase Pro mamadika ny iPad ho Macbook | Vaovao IPhone
Clamcase dia nanangana ny raharaha iPad taloha ela be, revolisiona tamin'izany fotoana izany noho izy iray amin'ireo tranga voalohany nijoro tamin'ny fitendry rehetra. Ankehitriny dia manolotra anay ny ClamCase Pro vaovao izy, maodely vaovao mitovy amin'ny tranga voalohany, nefa manify sy maivana kokoa, na eo aza izany dia miaro hatrany hatrany ny fitaovanao izy, ary manolotra izay rehetra ilainao hatao mba hahafinaritra kokoa ny fampiasana ny iPad anao. Afaka mahita ny fisehoan-javatra tsy manam-paharoa amin'ity tranga ity ianao ao amin'ny horonan-tsary, fa ankoatry ny estetika, dia manolotra safidy maro hahafahana mampiasa ny iPad amin'ny fomba hafa.
Amin'ny lafiny iray, azonao atao ny mampiasa ny iPad-nao toa Macbook Pro. Rehefa manokatra ny set ianao dia hanana ny iPad amin'ny toerana mety indrindra hijerena ny efijery sy ny klavie feno miaraka amina endrika mitovy amin'ny an'ny Apple keyboard rehetra. raha vao jerena dia toa izany Ny lakile dia ampy lehibe ary misaraka mba hanoratanao tsara ny fanoratana.
Raha te hankafy ny atiny multimedia ankafizinao ianao, dia azonao atao ny manohy mamoritra setroka mba hamadika ny fitendry sns afaka mampiasa azy ho toy ny mijoro ho an'ny iPad. Ny fahalalahana mihodina dia tanteraka, mba hahafahanao manitsy ny fitongilanana mba hahatonga ny zoro fahitana ho tonga lafatra.
Te hanana marindrano tanteraka eo ambonin'ny latabatrao ve ny iPad? Tsy misy olana, aforeto tanteraka ilay napetraka ary hanana izany toerana izany ianao. Izany rehetra izany dia misy fonony 20 × 24,5 × 2,15cm ary 680 grama, vita amin'ny polycarbonate sy aluminium, izay miantoka ny fiarovana ny fitaovanao.
Misy fonony ny mizaka tena hatramin'ny 100 ora amin'ny fampiasana tsy tapaka ary hatramin'ny 6 volana amin'ny fiandrasana, ary maharitra adiny 2 vao afaka mandoa vola feno. Ity fizakan-tena ity dia avo lavitra noho ny an'ny tranga hafa mitovy aminy eny an-tsena. Izy io koa dia manana mari-pamantarana fiampangana. Izy io dia manana jiro hamonoana azy io rehefa tsy hampiasainao hamonjy bateria ianao. Ny fifandraisana amin'ny iPad-nao dia natao tamin'ny alàlan'ny Bluetooth 3.0, ary manana fanalahidy miaraka amina asa manokana koa izy, toy ny fanaraha-maso multimedia, fanombohana, fanapahana, kopianana, apetaho ary ahidiana ny fitaovana. Rehefa manokatra ny tranga ianao dia hivadika ho azy ny iPad, ary rehefa hanidy azy ianao dia handeha amin'ny fomba torimaso. Ny raharaha dia mifanaraka amin'ny iPad 2, 3 ary 4.
Ny zavatra sisa holazaina dia ny vidiny: $ 169, avo kokoa noho ny saika tranga hafa mitovy amin'izany. Vonona ny halefa ny fonony manomboka amin'ny volana febrily, na dia efa azo atao amin'ny tranokala ofisialiny aza ny fividianana. Tranga fitendry mihaja miaraka amin'ny vidiny lafo vidy, mazava izany.
Fanazavana fanampiny - i-CaseBoard, fitendry Bluetooth miaraka amin'ny bateria ho an'ny iPad 2,3 sy 4
Loharano - ClamCase
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » ClamCase Pro dia mamadika ny iPad ho Macbook
Boover: ovao ny toerana sy ny haben'ny karatra fampandrenesana (Cydia)